Umhambisi wamanzi → Iipaki • Iindawo zemidlalo • Iiklabhu zeMidlalo Warsaw
Ngaba uyayifuna indawo yokuhambisa amanzi, indawo yokusela epakini okanye kwindawo yemidlalo? Inkampani yaseWater Point ibonelela izihluzi zamanzi ezingenabhotile, baseliUmthombo weenkokheli zehlabathi kumzi mveliso, apho sisasaza yedwa ePoland.
Umgangatho wamanzi okusela anikezelwa yimisebenzi yamanzi ubekwa kweliso ePoland zizikhululo zococeko kunye nezifo, eziqinisekisa ukuba amanzi afikelela kubamkeli kufanelekile ukuba asetyenziswe.
Iingcali ziyavuma ukuba izixeko ezininzi ePoland zinokuzingca ngamanzi amnandi namnandi empompini. Amanzi icocekile, ayinasifo ungcoliseko lwentsholongwane kwaye ityetyiswe kancinci, ukuze uyisele ungoyiki.
Olu luhlobo lwamanzi ahamba emthonjeni nakwimithombo yamanzi okusela, alungele iindawo zikawonke-wonke, ezinje ngepaki, amabala, igadi, iindawo zokudlala zabantwana kunye neelwandle.
Ukubonelela ngokufikelela kumanzi okusela acocekileyo ezixekweni, ingqalelo eyodwa kufuneka ihlawulwe kuba iindawo eziluhlaza, i.e. iipaki zedolophu, amabala okudlala kunye nawo onke amaziko ezemidlalo, kubonelelwa ngokwandiswa kwabantu abasebenzisayo kubangela ukwanda kwemfuneko yokufumana amanzi amatsha. amanzi.
Abantwana kunye nolutsha, ngakumbi ngexesha lokuzivocavoca kakhulu, badinga inani elikhulu lamanzi. Ke, ngokufaka imithombo yamanzi okusela kwiindawo zokudlala zabantwana, nakwiindawo zemidlalo, unokubonelela ngamanzi okusela anencasa, okuya kuba yenye indawo kwiziselo ezinencasa.
Uncedo olongezelelekileyo lwabaselayo bangaphandle lithuba lokuphelisa iibhotile zeplasitiki kunye nokubumba ulwazi malunga nendalo yabantu abancinci.
Iindawo zokuzonwabisa, amabala, iipakethi kunye neendawo zemidlalo ziindawo apho ifumaneka khona imithombo yamanzi kunye namanzi okusela, ekungapheleli ukunxanelwa kwakho kuphela, kodwa nokuhombisa le ndawo.
Ukuphuza imithombo yamanzi ivumela ukucoceka kunye nokunxanxwa ngokukhawuleza, kwaye uyilo lwala maxesha lugxininisa ukubonakala kwesithuba.
Kubalulekile ukufundisa abantwana kwasebancinci ukuba amanzi avela emithonjeni nakwimithombo yamanzi okusela ayenzelwe kuphela ukusela kwaye izandla okanye iithoyi akufunekanga zihlanjwe kuwo.
Ngokukodwa ehlotyeni, zonke iindwendwe ezihamba epakini okanye abathathi-nxaxheba kwimidlalo kunye neziganeko zemidlalo ezibanjelwe kumaziko emidlalo ziyakuyixabisa into yokuba banokuwucima ngokulula unxano lwabo ngamanzi ahlaziyayo nasempilweni, aphuma kwindawo yokuhambisa amanzi okanye entwasahlobo.
Ukufaka izixhobo ezenza ukuba sisebenzise simahla kunye nococeko amanzi okusela akumgangatho ophezulu kwiindawo ezisezidolophini kuya kuthandwa ngakumbi, kungekuphela ePoland, kodwa nakumazwe amaninzi aseYurophu. Iziselo zokusela amanzi zilungele kwaye kulula ukuzisebenzisa, ngenxa yoko abantwana, abakwishumi elivisayo, abantu abadala kunye nabadala banokuzisebenzisa ngempumelelo xa kufuneka. Ungasela amanzi ngqo, ugcwalise eyakho ibhotile okanye isitya senja ngayo.
Akusafuneki uphathe iibhotile zamanzi kunye nawe njengoko amanzi amatsha ahlaziyayo akufuphi. Iindawo zokuhambisa amanzi zikwanceda ukhathalelo lwendalo ngokuthi kupheliswe ukungaphezulu kwenkunkuma evelisiweyo.
Imithombo yokusela yamanzi ebekwe kwiipaki kunye namaziko emidlalo iya isiba ithandwa kakhulu ngenxa yokulula ukusebenzisa kunye nococeko.
5 / 5 ( 33 iivoti )
amanzi acocekileyo ezipakiniamanzi acacileyo kwipakiamanzi asimahla ezipakiniImithombo kwiipakiukusela imithombo yamanzipitniki kwiipakibasela iipakinotywala epakiniamanzi kwizibonelelo zemidlaloamanzi kwiipakiukusela amanzi ezipakiniamanzi epakiniintwasahlobo ezipakiniamanzi entwasahlobo epakini